ဘယ်လို Long ကတစ်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးနောက်ဆုံးမ - SAM ကို-ဗြိတိန်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » သတင်း » သတင်း » ဘယ်လို Long ကတစ်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးနောက်ဆုံးမ
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2018-10-01 မူလ:ဆိုက်ကို
သင်သည်သင်၏ဝင်းအလှဆင်ဖို့လိုတဲ့အခါအဘယ်သူမျှမမကြာခဏခြံစည်းရိုးကိုပြောင်းလဲရန်လိုလားသောကွောငျ့, သငျသညျ, ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူတစ်ဦးခြံစည်းရိုးကိုရွေးချယ်ရပါမည်။ ဒီအမှုဖြစ်လျှင်, ကရှုပ်ထွေးစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါတို့ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး ဒါကြောင့်သာမန်သစ်သားခြံစည်းရိုးထက်တန်ခိုးကြီးသည်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးနိုငျသောကွောငျ့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုရှည်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကြာရှည်သနည်း? ကျွန်တော်တို့ကိုအောကျတှငျကအကြောင်းသိပါစေ။
ဗီနိုင်းပစ္စည်းများခြံစည်းရိုးပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုရန်သူတို့ကိုစံပြဖြစ်စေအများအပြားအားသာချက်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဗီနိုင်း resins ခြံစည်းရိုးမိုဃ်းရွာစေသဖြင့်ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်မဟုတ်ပါဆိုလိုတာကခိုင်မာတဲ့အစိုဓာတ်နှင့်အစိုဓာတ်ကိုခုခံ, ရှိသည်။ အဆိုပါဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုလည်းအလွန်အကြမ်းခံဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် bug တွေ, အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်အခြားပိုးမွှားကိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဗီနိုင်းပစ္စည်းများသင့်ရဲ့ခြံစည်းရိုးတပ်ဆင်၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကနဲ့တူအဖြူနှင့်အတောက်ပတည်နေကြလိမ့်မည်ဆိုလိုတာကကိုလည်းရှင်းလင်းဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ သို့သျောလညျး, အဖြူရောင်ပုဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး၏တစ်ခုတည်းသောအရောင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့အစဉ်အလာများ & quote ဖယ်ရှားပစ်ရချင်သူကိုပိုပြီးအနုပညာဖောက်သည်များအတွက်ဘက်စုံပေး, သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ၏ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်; အဖြူခြံစည်းရိုး & quote ;.
ဗီနိုင်းတဲ့လူလုပ်ပစ္စည်းဖြစ်သော်လည်းဤအအားသာချက်များအပြင်, ဒါဟာအလွန်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပြန်လည်အသုံးပြုနှင့်လည်းဘုံဆား, အများဆုံးပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲသဘာဝအတ္ထုများထဲကတစ်ခုကနေဖန်ဆင်းတော်ကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအမြစ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကူညီပေးသည်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပုံတူပွားရန်လွယ်ကူသည်ပစ္စည်းပမာဏကြီးမားတဲ့ထုတ်လုပ်ရန်စွမ်းအင်၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုလိုအပ်တယ်, ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအပါအဝင်အများအပြားထုတ်ကုန်သို့ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
A ကောင်းဆုံးသစ်သားခြံစည်းရိုးအလွန်အားကောင်းတဲ့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းချေးခြင်းဖြင့်ပျက်စီးသောနေ့ကရှိပါတယ်။ သင်ပိုမိုထက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုဘို့အိမ်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြလျှင်, သင်ကအနည်းဆုံးအကြိမ်ပေါင်းများစွာခြယ်သခြင်းနှင့် fixed ခံရဖို့, ဒီကာလအတွင်းသစ်သားခြံစည်းရိုးအကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုပြောင်းလဲနိုင်ပေမည်။ ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အခြေခံစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခံယူအဖြစ်တော့ဘူးဘဝကိုရှိသည်။ သို့သော်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသငျသညျကိုမျှော်လင့်မယ်သကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးနေကြသည်မဟုတ်, ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးခြယ်သို့မဟုတ် retouched ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကအရောင်တွေကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်, သင်သင်တန်းဆေးသုတ်၏နိုင်ပါတယ်။
သစ်သားခြံစည်းရိုး၏ကျေးဇူးတော် 10 မှ 15 နှစ်အကြာရှည်နိုင်ပေမဲ့, အဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး၏သင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှု 20 သို့မဟုတ်ပင်နှစ်ပေါင်း 30 ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျပိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်အများစုဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးထုတ်ကုန်ပင်ရှည်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကလိုအပ်အဖြစ်အဘို့ကြာရှည်ခံ, ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ဦးတစ်သက်တာအာမခံကိုဆက်ကပ်။
ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုသင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအတွက်အသက်ရှင်ရန်စီစဉ်ထားသောနေရာများအဘို့ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအနည်းငယ်သာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပြီးအလွန်ကောင်းစွာသုံးနိုင်တယ်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အိမ်တွေအများကြီးဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံဖြစ်ခြင်း, ကြီးစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါပဲ။
သင်တစ်ဦးဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ပါကယေဘုယျအားဖြင့်, သင်သက်တမ်းစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ ကျနော်တို့အပါအဝင်, အထူးဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးတစ်ထုတ်လုပ်သူများမှာဗီနိုင်းမြင်းခြံစည်းရိုး, ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုး, Semi-ပုဂ္ဂလိကခြံစည်းရိုး, ဗီနိုင်း pincket ခြံစည်းရိုး, etc ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်မားဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အညီသင့်ကိုယ်ပိုင်ခြံစည်းရိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့ကိုရန်သင့်အားကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက် browse နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောမေးခွန်းများကိုနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးနောက်ဆုံး ဗီနိုင်းပစ္စည်းများအကြောင်း ဗီနိုင်းပစ္စည်းများ ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်း picket ခြံစည်းရိုး တစ်ပိုင်းပုဂ္ဂလိကခြံစည်းရိုး